Dream Job Myanmar - Tips
အလုပ်ရှာသူများအတွက် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ပုံပြရှင်းလင်းချက်များ
Register & Login with Facebook!
Receive Offer from Company!
Find and Apply Best Job
FaceBook ဖြင့် Registerလုပ်ခြင်း၊ Log in ၀င်ကာအသုံးပြုခြင်း
အလုပ်ရသွားသူတိုင်း Dream Job Myanmar မှ Gift Moneny လက်ခံကြရအောင်
Apply foraJob and Interviewed !
Get Best Job & Request Gift Money !
အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေပြီး ကုမွဏီသို့အလုပ်လျှောက်ကြရအောင် !
ကုမ္ပဏီထံမှ အလုပ်လာလျှောက်ရန်ကမ်းလှမ်းစာများ လက်ခံကြရအောင်
You can use Dream Job Myanmar easily with your Facebook account.
An employer used to browse the resumes for hiring requisite staffs.
The employer will mail you when they found out your skill and experience are suitable with their requirement. So you should fill your resume to be completed.
We inform you too that you’ve received the offer mail form employer (Company).
You can see detail view of this job announcement and apply it easily.
You can make quick-search on the Dream Job Myanmar home page, as follows:
Type words into the text-box marked 'Keyword' thatwhich describe the kind of job you are looking for, such asajob title, skill or company name.
Choose one or more in the box of "Location", “Job Category”, “Job Type”, “Salary”, “Industry”, “Company Type” as you wish.
And then, just click the 'Search Job' button.
The job list will be appeared which match with your keywords and specified conditions. You can see detail view of each job by clicking on each title of the job list and apply easily by clicking on apply button.
Dream Job Myanmar Website တွင် Log in with Facebook ကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့်
သင့်၏ဖေ့(စ်)ဘွခ်အကောင့်ဖြင့် Registerအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပြီး ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Point: Log in ၀င်ထားလျှင် နှစ်သက်ရာအလုပ်ကြော်ငြာများကိုBookmarkလုပ်နိုင်ခြင်း၊
Websiteတွင် Like နှင့် Share လုပ်ကာ Facebookတွင်သူငယ်ချင်းများထံသတင်းပါးနိုင်ပါသည်။
သင်ဟာအလုပ်ခန့်အပ်ခံရပြီဆိုလျှင် အလုပ်ခန့်အပ်ခံရခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ဂုဏ်ပြုငွေသားဆုလက်ဆောင် ရယူနိုင်ပါပြီ။
အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်။ အင်တာဗျူး နှင့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အချက်အလက်များ စစ်ဆေးအောင်မြင်ပြီးလျှင် သင်၏ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဆင်းရက်မတိုင်မီမှာDream Job Myanmar Website ထဲသို့ ဝင်လာခဲ့လိုက်ပါ။
အလုပ်ခန့်အပ်ခံရခြင်းအထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြု ငွေသားဆုလက်ဆောင်ကိုရယူနိုင်ရန် အသင့်ပြင်ထားသော လျှောက်လွှာမှာ အလွယ်တကူရေးသားဖြည့်စွက်ပေးပါ။
ကျွန်မတို့ Dream Job Myanmar မှ အလုပ်ခန့်အပ်ခံရခြင်း အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ဂုဏ်ပြုငွေသားဆုလက်ဆောင်ကို သင်ရက်၃၀အလုပ်တက်ပြီးသည်ကို စုံစမ်းအတည် ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ သင့်ရဲ့ဘဏ်ငွေစုစာရင်းသို့ငွေလွှဲပေးမှာပါ။ (ဘဏ်ငွေစုစာအုပ်မရှိလျှင်မှတ်ပုံတင်ယူပြီးဘဏ်မှာအလွယ်တကူသွားရောက်ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်)
*သတိ - ရုံးတက်ရက် ရက်(၃၀)အတွင်း ပျက်ကွက်မှု(သို့) အလုပ်ထွက်မှုရှိခဲ့ပါက ငွေသားဆုလက်ဆောင်ကိုပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
Q How do you rank the search results?
A Jobs are ranked solely by “Recommended”, “date”, “number of like” or “number of your friend’s like”.
Q How do I see only new jobs?
A If you want to change this setting for all your searches, you only sort by “latest”.
Q Can I save my favourite job?
A Yes. When you see job detail or job listing, you can click on Bookmark button and it’ll be automatically saved in your bookmark list. You can see it anytime in your page and apply too. Also, you can use Facebook “Like” and “Share” buttons so that you can share interesting job with your friends in Facebook.
Q What isaJob Alert email?
A At first, you search the job with some keywords and conditions as you wish. If you would like to receive alert mail when there isanew job posting which match with your search criteria, you can use Job Alert email. Just click on Email Me button and we’ll mail you whenanew job was posted daily or weekly as you’ve chosen.
Q How do I get offer mail from company?
A Make your “Resume” perfect and waiting for offer mail from companies. You can edit your “Resume” to click on the “Edit Resume”. You can check offer mails to click on the “Inbox”. Offer Mail is the welcoming message from the company. They would like you to apply by all means. Please makeacontact with them as soon as possible when you receive an offer mail.
You can apply forajob online inafew minutes.
Click on the “Apply” button to apply forajob. After clicking, you can check “Your Resume Score” and choose edit “Resume” or “Apply”. To Get The Best Job, you had better fill your Resume. Employers can find you easily.
If you are selected for on documentary screening, the company may inform you of detail information for interview such as date, time and others. All you need to do is to be well prepared for your job interview. Additionally, you are able to check your recruitment status to click on the “Applied Company List”.
When you are employed, Request for Employed Gift Money to us, Dream Job Myanmar!
Congratulations, you have gotajob. When you pass applicant screening and interview, then access to Dream Job Myanmar after before you checked your first working day.
Please full fill the form on your Dream Job Myanmar page and request Employed Gift Money.
We Dream Job Myanmar present Employed Gift Money! We transfer Employed Gift Money to your bank account after confirmed your continuous 30 days work attendances.
Dream Job Myanmar Website ထဲမှာ အလုပ်များကို အမြန်ဆုံးရှာဖွေနိုင်ပြီး၊ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ကုမွဏီအမည်၊ အလုပ်အကိုင်အမည် စသည်ဖြင့် သင်ရှာဖွေနေသာအလုပ်အကိုင်ကို “Keyword” ဟု
ရေးပြထားသည့် လေးထောင့်ကွက်ထဲမှာ စာလုံးများရိုက်(သို့)ရွေးထည့်ပါ။
သင်အလုပ်လုပ်လိုသော ကုမွဏီအမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ လစာ၊ တည်နေရာတို့
ကို တစ်ခု သို့ တစ်ခုထက်ပိုပြီး နှစ်သက်သလို ရွေးချယ်ပါ။
“Search Job” ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
သင် serach ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသည့်နောက် လက်ရှိဝန်ထမ်းခေါ်ယူဆဲ အလုပ်ကြော်ငြာများစွာ ပေါ်လာပါ
လိမ့်မည်။ အလုပ်တစ်ခုချင်းဧ။် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင်နှိပ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်
ပါသည်။ သင်သတ်မှတ်ထားသောရွေးချယ်မှုနှင့်စာလုံးပေါ်တ္ဂင်လိုက်၍ ကိုက်ညီသော အလုပ်ကြော်ငြာများ
ကို ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။ တခုမှမရွေးထားလျှင် ခေါ်ယူဆဲ အလုပ်ကြော်ငြာအားလုံးကိုဖော်ပြပေးမည်
အဆင့်(၄) အသေးစိတ် ရေးထားသောစာမျက်နှာတွင် Apply ခလုတ်ပါရှိပြီး အလွယ်တကူအလုပ်လျှောက်နိုင်ပါသည်။
Point: သင့်ရဲ့CV Form ကိုလက်ကိုင်ဖုံးဖြင့် အလွယ်တကူရိုက်နိုင်၊ရွေးနိုင်အောင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Online ကနေ အလုပ်လျှောက်နိုင်ပါပြီ။
Search ကိုနှိပ်ပြီးသွားတဲ့နောက် အလုပ်ကြော်ငြာသစ်များပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အလုပ်၏အသေးစိတ်
အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုရန် ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အလုပ်လျှောက်ရန်အတွက် Apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Apply နှိပ်ပြီးနောက် Edit Resume (သို့မဟုတ်)
Apply ကိုရွေးချယ်၍ သင်၏CVသည် အချက်လက် ပြည့်စုံမှု ရှိမရှိကို Your Resume Score ကို
စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအတွက် Resumeကို ပြည့်စုံစွာ
ဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။ သင့်ကိုလည်း အလုပ်ရှင်က လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အချိန်၊ နေ့ရက် စသည်ဖြင့် အင်တာဗျူးနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို
ထို့အပြင် Applied Company List ကိုနှိပ်၍ သင်အလုပ်လျှောက်ထာတဲ့ အခြေအနေကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ရှင်ဟာ အလုပ်ရှာဖွေသူတွေရဲ့ CVတွေကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာ နှစ်သက်ရာအချက်လက်တွေဖြင့်
ကိုက်ညီသောသူများကို အလုပ်လာလျှောက်ရန်ကမ်းလှမ်းသည့်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သဖြင့် သင်ဧ။်လုပ်ငန်း
အတွေ့ကြုံ နှင့် ပညာအရည်အချင်းသည် သင့်လျှော်ကိုက်ညီပါက သင့်အားကမ်းလှမ်းစာကို အီးမေးလ်
ထိုအခါ သင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့မှလည်းကမ်းလှမ်းစာရောက်ရှိနေကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။
အဆင့်(၄) သင်သည် အလုပ်ခေါ်ကြော်ငြာအချက်လက်များကိုအသေးစိတ်ဖတ်ရှုကာ၊ ကြိုက်နှစ်သက်သောအလုပ်
မေး အလုပ်ကြော်ငြာတွေကို ဘယ်လိုရှာကြည့်မလဲ။
အလုပ်ကြော်ငြာတွေကို အညွှန်းအလုပ်အကိုင်၊ သင့်သူငယ်ချင်းများရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုအရေအတွက်၊ နေ့ရက်
အလိုက် သင်နှစ်သက်ရာအချက်ဖြင့်ရွေးရှာကြည့်လျှင် ယင်းအတိုင်းဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖြေ သင်ရှာဖွေထားသောအချက်များပါဝင်တဲ့အလုပ်ကြော်ငြာသစ်တွေကို ဖော်ပြပေးစေလိုလျှင် “latest” ကိုသာ
မေး အလုပ်ရှာသူကနှစ်သက်သော အလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာများကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသလား။
ဖြေ ဟုတ်ကဲ့၊ ဘယ်အချိန်မဆို အလုပ်ကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့Dream Job Website
Account ထဲမှ Bookmarkကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Facebook တွင်လည်း Like နှင့် Share ကိုအသုံးပြု၍ သင်စိတ်ဝင်စားသောအလုပ်အကြောင်းကို
မေး Job Alert Emailဆိုတာ ဘာလဲ။
ဖြေ သင့်နှစ်သက်ရာအချက်များဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေခြင်းကို “JobAlertEmail” ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ အလုပ်အကိုင်သစ်များစကြော်ငြာတဲ့အခါ သင်ရှာဖွေတဲ့အချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှု
နေ့စဉ်(သို့)အပတ်စဉ် သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်း အလုပ်အကိုင်အသစ်ရောက်တိုင်း သင့်ကို အီးမေးလ်
မေး ကုမွဏီရဲ့ အလုပ်လာလျှောက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဘယ်လိုရနိုင်မှာလဲ။
ဖြေ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(CV or Resume)အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာရေးသားခြင်း (သို့)ရွေးချယ်ထားဖြင့်
ပြင်ဆင်ထားရုံပါ။ Dream Job Myanmar Website ထဲမှာ သင့်အတွက် အသင့်ဖြည့်ရုံ(သို့)ရွေးချယ်ရုံCV Form
ကိုလည်းအသင့်ပြင်ထားတာမို့ ဖြည့်စွက်ပြီးကုမွဏီရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစောင့်နေရုံပါပဲ။ လိုတာတွေထပ်မံဖြည့်
စွက်လို(သို့)ပြုပြင်လိုတယ်ဆိုလျှင်လည်း Edit Resume ကို နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့Resumeကို ပြန်လည်ပြုပြင်
မေးလ်သည်သင့်အား ကုမွဏီမှကြိုဆိုသောအမှာစကားဖြစ်ပါသည်။ကုမွဏီက သင့်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို
အလုပ်လျှောက်စေချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။တက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး ကုမွဏီသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။